कोहलपुरको टिकटक हो’टलमा यौ’ न ध’ न्दा : पुरुष ग्रा हक खोज्ने सा’हुनी प’ क्रा उ ! – Dainik Sangalo
कोहलपुरको टिकटक हो’टलमा यौ’ न ध’ न्दा : पुरुष ग्रा हक खोज्ने सा’हुनी प’ क्रा उ !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०७, २०७८ समय: १३:४१:५०
कोहलपुर – ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले यौ न ध’ न्दामा संग्लन केहीलाई प’ क्रा उ गरेको छ । कोहलपुरको बसपार्क क्षेत्रमा यौ न ध’ न्दा बढिरहेको सूचनाको आधारमा पुगेको प्रहरी टोलीले यौ न ध’ न्दाको लागि पुरुषहरु खो ज्ने एक जना सा’हु’नी, एक पुरुष, दुई यु’व’ती र एक हो’टल मालिकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कोहलपुर प्रहरीका अनुसार बसपार्क पछाडी रहेको हरियाली मार्गमा नाम नरहेको एक खाजा पसल सञ्चालन गर्ने सा’हु’नी’ले पु’रुष ग्राहक खोजेर नजिकै रहेको टिकटक हो’ट’ल’मा यौ न ध’ न्दाको लागि पठाएकी थिइन् ।
दिउँसोदेखि नै निगरानीमा राखेको प्रहरीले हो’ट’ल’बाट यु’वती र उक्त सा’हु’नी’ले खोजेका पु’रुष ग्रा हकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त पु’रुषले सा’हु’नी’ले यु’व’ती’हरु मिलाइदिएको बताएपछि खाजाघरमा पुगेर प्रहरीले सा’हु’नी’ला’ई समेत नियन्त्रणमा लिएको हो । अहिले प’ क्रा उ परेका सबैलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा राखिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा यौ न ध’ न्दा भइरहेको पाइए प्रहरीलाई सूचना दिन ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
एजेन्सी । बलिउडकी सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री कट्रिना कैफ आफ्नो विवाहको दिन निकै सुन्दर देखिएकी थिईन् । कैटरीना कैफ हरेक विवाह समारोहमा सुन्दर देखिन्छिन्।
कट्रिना कैफको सुन्दरताको चारैतिर चर्चा चल्दै आएको छ । अहिले कट्रिनाले प्रिवेडिङ फेस्टिभलका नयाँ तस्विरहरू सेयर गरेकी छिन् । जसलाई देखेर तपाईको मुखबाट एक शब्द मात्र निस्कनेछ र त्यो वाउ हो।
यी तस्बिरहरूमा, सब्यसाचीको सुन्दर साडीले कट्रिना कैफको लुकलाई थप सुन्दर देखाएको छ । उनले लगाएको साडी कुनै साधारण साडी थिएन। उनको साडीको बारेमा तपाईले थाहा पाउनु भयो भने छक्क पर्नु हुनेछ । अभिनेत्रीको यो पेस्टल साडी बनाउन १८०० घण्टा लागेको थियो ।
यो ४० कारीगरहरु द्धारा बनाईएको थियो। डिजाइनर सब्यसाचीले कट्रिना र विक्कीको यो पोशाकको विवरण इन्स्टामा सेयर गरेकि छिन् ।
Last Updated on: December 22nd, 2021 at 1:41 pm